I-Thailand ivavanya itekhnoloji ye-Huawei ye-5G ngaphandle kokukrokrela | I-Androidsis
I-Thailand ivavanya itekhnoloji ye-Huawei ye-5G ngaphandle kokukrokrela
Huawei, ZTE, IQualcomm kunye nezinye iinkampani ngabadlali abakhulu kwicandelo lobuchwepheshe be5G. Iinkampani ezininzi ziyasebenzisana namazwe ahlukeneyo ukuvavanya itekhnoloji ye5G entsha. Phakathi kwabo, iHuawei ijongene neengxaki kwamanye amazwe ngenxa yokuvalwa kwe-United States ekusebenziseni izixhobo zayo. Ukongeza, ilizwe laseMelika lide labongoza amahlakani alo ukuba anqande ukusetyenziswa Izixhobo zeHuawei 5G ngelixa usebenzisa itekhnoloji entsha.
Kwitrayer, iqabane elidala laseMelika eAsia, Thailand, liye lazimanya neHuawei kwibench ye5G. Ngaphandle koxinzelelo oluqhubekayo oluvela eUnited States ukuba zingasebenzisi izixhobo zikaHuawei, iThailand yenza ngokuchaseneyo ngqo. Iya kuba luvavanyo lokuqala lwenkampani yaseTshayina kuMazantsi mpuma eAsia.
Nangona iThailand ikhathazekile ngokhuseleko, itsho njalo Intsebenziswano ayithethi ukuba abaxoxi ngemicimbi yezokhuseleko. Ke liliso lakhe kwinkampani yaseTshayina. (Kutshanje: IHuawei ibonelela ngelebhu yokhuseleko e-Poland ukudlula kwi-5G)
“Sizijonge ngeliso elibukhali izityholo kwihlabathi liphela. Nangona kunjalo, le projekthi yebhedi yovavanyo ye-5G lixesha lokulingwa kweli lizwe, ”wongeze watsho uPichet, uMphathiswa wezoQoqosho lwe-Digital. "Sinokwenza uqwalaselo oluya kuba luncedo ekuqinisekiseni okanye ekungqineleni izityholo."
Ngelixa sithetha nge-testbed entsha ye-5G kwikhampasi yaseSriracha yeYunivesithi yaseKasetsart kwiphondo eliphakathi laseChonburi, UPichet uthe urhulumente uxhalabile malunga nezi zityholo malunga neHuawei. Ukongeza, ezinye iinkampani, ezinje ngeNokia, iNokia, kunye nabaqhubi beefowuni zaseThai, ziyasebenza kwindawo enye yetekhnoloji ye5G. (Fumanisa: Umsunguli weHuawei uyayiphika into yokuba inkampani ihlola iUnited States)
I-Thailand isebenza ukuzisa iinkonzo ze-5G zorhwebo nge-2020. Okwangoku, ikhokelela kwindlela yetekhnoloji yakutshanje kunye neSingapore. UPichet Duriongkaveroj wongeze ukuba abanye oomnxeba baseJapan banomdla wokusebenzela ulingo lwe-5G kweli lizwe.
Umzi wozakuzo wase-US e-Bangkok uthe i-United States "ixhasa uthungelwano olukhuselekileyo lonxibelelwano kunye nokubonelela ngemixokelelwano ekhululekileyo kubathengisi abaphantsi kolawulo lwangaphandle kurhulumente okanye impembelelo engafanelekanga ebangela umngcipheko wokufikelela okungagunyaziswanga kunye nomsebenzi we-cyber. Ngolunya. Isithethi siqhubeke sathi: "Sihlala sibongoza amahlakani kunye namaqabane ukuba athathele ingqalelo ubungozi obunje kwaye asebenzise ukuqapha okufanayo ukuqinisekisa ukhuseleko lwazo zonxibelelwano zonxibelelwano kunye namakhonkco onikezelo, kubandakanya naxa kunikezelwa iikhontrakthi."
IHuawei, exhomekeke kumashishini angaphandle kwe China, iyalungisa iindlela zokukhusela ezinye iikhontrakthi. Sele bekhusele ngaphezulu kwe-30 5G yezorhwebo jikelele. Inkampani yaseTshayina ikwathethathethwano nabanye abasebenza ngefowuni ukuseta ubuhlakani bengingqi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Thailand ivavanya itekhnoloji ye-Huawei ye-5G ngaphandle kokukrokrela
Ukucoca ixabiso le-LG G8 ThinQ nge-128 GB yememori yangaphakathi